Saturday July 04, 2020 - 14:31:17 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo saaka lagu weeraray saldhig ay ciidamo katirsan Booliska dowladda Federaalka uga sugnaayeen agagaarka dekadda caalamiga Muqdisho ayaa dhaliyay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah.
Al Shabaab waxay sheegtay in qaraxa ka dhacay degmada Xamar Jajab ay ku dhaawacmeen 8 Askari oo katirsan ciidamada Booliska dowladda Federaalka islamarkaana ay ku dhinteen 2 askari "Laba askari oo murtadiinta katirsan ayaa ku dhintay qarax ay mujaahidiintu kula beegsadeen nawaaxiga dekadda Muqdisho sideed kalane waa ku dhaawacmeen" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Dhinaca kale Ilo wareedyo laga helay gobolka Baay ayaa sheegaya in qarax xooggan uu maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi.
Qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa lala eegtay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan maamulka 'Koonfur galbeed' gaar ahaan kuwa canshuur aruurinta.
Warar hordhac ah waxay sheegayaan in ugu yaraan 4 Askari ay qaraxa ku dhinteen, saraakiil katirsan maamulka fadhigiisu yahay Baydhabo ee Itoobiyaanka la shaqeeya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamadooda qarax lagu beegsaday.
"Afar katirsan maleeshiyaadka maamulka Ashahaadda ladirirka Koonfur galbeed isku magacaabay ayaan ku dhintay qarax ay mujaahidiintu kula beegsadeen isku imaatin ay uga sugnaayeen Baydhabo" ayaa lagu yiri war ay baahisay Idaacadda Andalus.
Ma ahan markii ugu horraysay oo weeraro ka dhan ah maleeshiyaadka maamulka Cabdi Caziiz Laftagareen ay ka dhacaan Baydhabo iyo duleedkeeda, isbuucii lasoo dhaafay ayay aheyd markii xarunta gobolka Bay lagu dilay sarkaal katirsanaa hay'adda dambi baarista ee loo yaqaan CID.